ပင်လုံဇာတ်ကြောင်း ပြန်ပြောင်းလေ့လာသော် – အပိုင်း (၁) | MoeMaKa Burmese News & Media
အဆိုပါစက္ကူဖြူစာတမ်းပါအချက်အလက်များကို ၁၉၄၅ ဇွန် ၁ တွင် ဗြိတိသျှပါလီမန်၌ စတင်၍ အခြေအတင်ဆွေးနွေးကြသည်။ ယင်းသို့ ဆွေးနွေးရာ၌ ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ကိုယ်စားလှယ် အိန္ဒိယနှင့်မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ ကိုလိုနီအတွင်းဝန်ကလေး မစ္စတာအေမာရီနှင့် လေဘာပါ တီအမတ် မစ္စတာဘာစတက်ဖို့ကရစ်တို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးကြသည်။ အေမာရီက Tribal Areas ဟု ခေါ်ဆိုသော တောင်တန်းနယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ –
ဤအခြေအနေတွင် “ချက်ကနဲဆို နားခွက်က မီးတောက်” သကဲ့သို့ အကင်းပါးနပ်စွာ သိနားလည်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက “မြန်မာတို့သည် ဒိုမီနီယံကို စိတ်မျှပင် မကူး၊ လုံးဝကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်ရေးကိုသာ လိုချင်ကြောင်း၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ဟုဆိုရာ၌ တောင်တန်းနယ်များ မပါဝင်သော လွတ်လပ်ရေးသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိ” ဟူ၍ လူထုဟောပြောပွဲတွင် အတိအလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုအခါ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့၏ နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးအရ ပြန်လည် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုများကို သိမြင်လာကြသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရပ်လုံးသည် တပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆန္ဒပြကန့်ကွက် ပွဲကြီးများကို ကျင်းပခဲ့လေသည်။ ၁၉၄၅ သြဂုတ်လ ၁၆ မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ဖတပလ အဖွဲ့ ချုပ်တည်ရှိရာ အမှတ် (၈)ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်းရှိအဆောက်အဦ( ယခုပန်းချီ ပန်းပု အနုပညာပြခန်း) တွင် ဖတပလ က မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကို ဖိတ်ခေါ်၍ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ စတုတ္ထအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် –
ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဘုရင်ခံ ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ် သည် ဖဆပလအား အသိအမှတ်ပြု၍၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအား ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးကာ ဘုရင်ခံ အမှုဆောင်ကောင်စီအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းစေခဲ့သည်။ ဘုရင်ခံ အမှုဆောင်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် (၁၀) ဦးမှာ –
မည်သို့ဆိုစေ…. တောင်တန်းဒေသစုံစမ်းရေးကော်မတီ၏ရှေ့မှောက်၌ ထုတ်ဖော်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထိုဆန္ဒဖော်ထုတ်ချက်များသည် ပင်လုံစာချုပ်ကြီး၌ ချမှတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဆန္ဒသဘောထား၊ ပင်လုံ စိတ်ဓါတ်နှင့် ပြည်ထောင်စု သနိဋ္ဌာန်ပြဋ္ဌာန်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖွင့်ဟအတည်ပြုချက်များပင်ဖြစ်ရာ ထိုကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာများ သည်လည်း ပင်လုံစာချုပ်ကြီးကဲ့သို့ပင် ပြည်ထောင်စုသမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးတစ်တိုင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
2 Responses to ပင်လုံဇာတ်ကြောင်း ပြန်ပြောင်းလေ့လာသော် – အပိုင်း (၁)
mink on January 27, 2013 at 5:55 pm
ဗိုလ်ချုပ်သမီးဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်လို ရဲဝံ့ပြတ်သားမှာဘဲဟု ယုံကြည်အားထားမိ၏။ သူမ နိုင်ငံရေးလောကထဲ ၀င်ရောက်လာတော့ ဒုတိယအကြိမ် လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ-ဟု တိုက်ပွဲခေါ်သံပေးလိုက်တော့ အားတက်မိ၏။ နောက် ယတ္တောကိစ္စ နဲ့ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှလွတ်လာတော့ ဒုတိယ ပင်လုံ ခေါ်ဘို့သဘောတူပြန်၏။ ပိုမို အားတက်မိ၏။ နောက်တော့ စစ်ထွက် သမတကြီးနဲ့ တွေ့ ပြီး ဒုတိယအကြိမ်- လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေ -ပင်လုံညီလာခံ ဆိုတဲ့အသံတွေ တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့၏-ထို့ အတူ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ သူမ အပေါ်ထားရှိသည့် ယုံကြည်ချက် မျှော်လင့်ချက်တွေလဲ ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့၏။ လူထုပါမှ ရမယ်ဆိုလို့လူထုကတာဝန်ကြေ၏။
New rose on January 28, 2013 at 8:04 pm
ထောက်ခံပါတယ်။ ဟုတ်တယ် မှန်ပါတယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူတွေ အပေါ် ကတိလဲမတည် သစ်စာလဲမရှိ အာဏာပဲ မက်မောမိတယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် .ဖြစ်ပြီဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေအာလုံး နောက်ထပ်ဒုက်ခမရောက်အောင် သတိချပ်ဖို. လိုပြီဆိုတာ ပြည်သူဟာ ပြည်သူအားကိုပဲ အားကိုးပါတော.လို. သတိပေးပါရစေ။